I-Soularity Sound Relies kwi-NUGEN Audio kwiiRadio-Solid Products kunye neNkonzo yabathengi-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, i-Broadcastaster ye-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » iindaba » I-Soularity Sound Relies kwi-NUGEN Audio kwiiRadio-Solid Products kunye neNkonzo yoMthengi
I-Soularity Sound Relies kwi-NUGEN Audio kwiiRadio-Solid Products kunye neNkonzo yoMthengi
AUSTIN, JULY 10, 2019 - Ukusebenza nabenzi befilimu abazimeleyo bavumela abaqeqeshi bee-post-production ithuba lokuba bafake isitampu esongezelelweyo sokwakha kwiiprojekthi zabo. Nguwo kanye uhlobo lomsebenzi uKorey Pereira, ilungu le-MSPE kunye nomphathi / umlawuli womdali wase-Austin, i-Soularity Sound, kunye neqela lakhe eliqhayisa ukuvelisa. Ukuze uqhubeke nokuhambisa umxholo othabathayo kunye nomsindo oqhelekileyo apho iqela lakhe liye lalingana naye, uPereira uthembele ekukhetheni kwiplagi-ins NUGEN Audio.
Phakathi kwezixhobo eziqhelekileyo ezisetyenziswayo ze-NUGEN kwi-Soularity Sound yi-Loudness Toolkit (VisLM 2, ISL 2 kunye ne-LM-Correct 2) kunye neHalo Upmix. "Ndiyisebenzisa iVisLM into yonke into esiyidityanisayo kwiiPro Tools," kusho uPereira. "Ndiyathanda indlela umkhawulo we-ISL osebenza ngayo, kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ndiquka kwakhona iHalo Upmix nayiphi na ixesha ndidibanisa kuyo. Ndiyathanda ukusebenzisa iHalo Upmix ngomculo - ndifumana ukuba umculo uyandizwakala kakuhle kwaye uzalisa ngokuzungezile. Ndiyakuthanda ukuyibeka kwimvelaphi yam xa ihambelana neprojekthi. "
Ukunyaniseka kukuphakathi kwezinto eziphambili ekusebenziseni iNUGEN kwi-Soularity. "Ndiyathanda ukuba iimveliso zikaNUGEN zilula ukuyisebenzisa; kusebenza nje, "wongezela uPerira. "I-Halo Upmix isetyenziswa kakhulu, kwaye izandile ngakumbi kunanoma iyiphi enye ithuluzi lokuxuba. Ukuba uthetha ngokusebenzisa isixhobo sokuxubusha ngokubhekiselele kwi-panning ngemuva, iHalo Upmix izandi kakhulu zendalo. Izalisa isikhala ngendlela engaphezulu kwendalo. "
KuPereira, kungakhathaliseki ukuba indima yakhe kwiprojekthi, ilizwi elithethiweyo liyintloko. "Ndihlala ndixhalabele ngokucacileyo nokucacileyo kwintetho kwaye ndiyakuthanda ukwakha malunga naloo nto," utsho. "Ndenza umsebenzi omningi njengomhleli wencoko, ngoko kunjalo kubalulekile kule nkqubo. Xa ndixuba okanye ndenza uyilo oluhle, ndihlala ndicinga malunga nokuba ezinye izinto zidibana njani neengxoxo. Ndifuna ukuqinisekisa ukuba ilizwi elithethiweyo livakala kwaye lixhaswa yinto ejikeleze kuyo. Ngokufaka izixhobo ze-NUGEN kule nkqubo, yenza ubomi bam bube lula kakhulu. "
Kwifomathi yefestile ezimeleyo, uPereira ufumanisa ukuba usebenza kunye nabalawuli kunye nabenzi befilimu kwinkqubo yokucwangcisa ukudala. "Injongo yam yokuqala kukukwenza umxube omkhulu wokudlala kwimikhosi," uyachaza. "Ngaphandle koko, ndifuna ukuqinisekisa ukuba banomxholo womxube ohlangabezana nemigangatho yokusasazwa. Ndiya kwenza umxube wezobugcisa ocacileyo njengendawo yokuqala, ngoko ndiza kusebenzisa i-LOG ye-NM-Echanekileyo ukudala ukusasazwa kunye newebhu. "
Xa kuziwa kwiiprojekthi ezihambelanayo kunye nokusasazwa, i-NUGEN inikeza iqela elinamandla ngokusisombululo esikhulu. "Ngokombono wam, i-VisLM THE isisombululo xa uthetha ngokukhawuleza, "ubeka uPerira. "Akukho mveliso engcono kunokuba ubani uhambisa ngokusasazwa. Wonke umntu kufuneka asebenzise i-VisLM, ngakumbi nge-Netflix kunye nemilinganiselo yayo yakutshanje. I-VisLM ngumkhiqizo oxhaswe ngokusemthethweni, ngoko, engqondweni yam, ukuba usebenza ngokusemthethweni kungekho sizathu sokuba ungasebenzisi i-VisLM. "
Ukongeza kwiisombululo zesofthiwe, iPerira iphinda ihlaziywe yinkonzo eyenziwa ngabathengi be-NUGEN. "Ndiyathanda ukuba zijolise kakhulu kwizicombululo zabaqeqeshi bezandi kwaye ndiziva ngathi ndisebenza kunye neqela elizinikezele kuloo nto," utsho. "Ingxenye yileyo mveliso ihlala isebenza, kodwa, ukuba ufune uncedo, iqela le-NUGEN lihlala lifikeleleka. Bayazi kakuhle, kwaye ndiyakuthanda ukuba uvakalelwa ukuba usebenza nemveliso engcali, ebaluleke kakhulu. Kukho rhoqo kuya kuba nezinye iindlela ongakhetha kuzo, kodwa ndifuna into esebenzayo kwaye i-NUGEN iyenzayo. "
I-Soularity Sound inikezela ngeenkonzo zomsindo emva kokuveliswa kweeprojekthi ezifana neentengiso, iifilimu, umabonwakude kunye newebhu. Isandi soMoya sixhotyiswe ngokufanelekileyo ukuphatha yonke imimiselo yenkqubo yokulalelwa kwemveliso emva kokuveliswa komsindo, ukudibanisa izandi, ukupakisha kwe-stereo kunye ne-surroundings, u-foley kunye nokurekhoda kwe-FX, ukukhutshwa kwezwi kunye nokurekhoda kwe-ADR, ukulungiswa komsindo, ukubuyiswa kunye nokuveliswa kwevidiyo epheleleyo.
Ulwazi lwe-NUGEN yomsindo weeNkcukacha ezipheleleyo zekhaya, iyatholakala www.nugenaudio.com. Yonke iminye imibuzo, nceda imeyile [Imeyile ikhuselwe].
Malunga neNUGEN Audio
I-NUGEN I-Audio ngumvelisi wezixhobo eziphuculweyo zetekethi zokufundisa ezibonelela ngeendlela zokusasaza kunye nezithuba zendlela yokuvelisa izithuba eziphambili zokusingqongileyo kunye nokuphela kokuphela kokulawula ukuphakama, ukulinganisa, nokulungiswa kokufunyanwa komxholo ukuya kudlala. Ukubonakalisa amava okwenziwa kweli hlabathi le-NUGEN iqela lokuyila, izinto zenkampani zenza kube lula ukuhambisa umgangatho ophezulu, umsindo ohambelanayo ngexesha lokulondoloza, ukunciphisa iindleko, nokugcina inkqubo yokudala. Izixhobo ze-Audio ze-NUGEN zokuhlalutya, ukuxuba, ukuxuba kunye nokulandelela kusetyenziswa ngamagama aphezulu ehlabathini ekusasazeni, ukuveliswa kwemveliso, kunye nomculo. Ukufumana olunye ulwazi, tyelela www.nugenaudio.com.
Zonke iimpawu zokuthengisa ezibonakala apha ziyipropati yabanikazi babo.
Landela i-Audio yeNUGEN:
Ikhitshi yoVavanyo loMsindo lwenza iMiboniso yeVenkile yokuThelekiswa kweMic - Oktobha 10, 2019
IAmerican Motor Sport Gears Up kunye neCumma yaseCalrec - Oktobha 10, 2019
Iimveliso ze-TSL zoNyaka eziHlaziyiweyo kwiiSisombululo sayo seMonitorin kunye neeNkqubo zoLawulo lweSasazo kwi-NAB NY 2019 - Oktobha 7, 2019
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie evakalayo Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo ukuhlela ifilimu UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli NUGEN Audio mveliso Mveliso SJGolden - Iintetho kunye nemisrya kumabonakude IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago BuTeknoloji Injini yeVidiyo	2019-07-10
Previous: I-Hyper RPG I-YouTube yayo neTwitch Live Streaming Workflows ne-Blackmagic Design
next: I-Alchemy Post Sound Yenza I-Foot Foot Yayihamba Ngayo Ekukhuliseni I-Foley yeFX "I-Fosse / Verdon"